တစ်သူငယ်တန်းဆရာမအဖြစ်မဆိုပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များအလုပ်မလုပ်? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ငါ့ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ဒီအလုပ်အကိုင်ကဲ့သို့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ အဒေါ်ပြီးရင်ရည်းစား 26 နှစ်4နှစ်ပေါင်းနည်းပြဆရာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဦးစွာပြုလုပ်သံမဏိအာရုံကြောရှိသည်ဖို့လိုအပ်သောဖြစ်ပြီး, ဒုတိယအပဋိပက္ခများကိုထွက်လွယ်ကူချောမွေ့နိုင်စေဖို့, ဒါပေမဲ့သူတို့မည်။ တစ်ဦးအလုံးအရင်းနှင့်အတူတက်မစောင့်, တစ်စုံတစ်ဦး, yeah ခေါက်ကိုက်သို့မဟုတ်ထိမှန်ပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ပေဘူး။ အမြဲတမ်းဆရာမအပြစ်တင်ကြပါတယ်။
ပေါင်းနှစ်ဦးစလုံးဖွံ့ဖြိုးပြီးအူထဲမှာအတူတူ, သားသမီးလက်ဆေး-အစားထိုးဝတ်ထား, ကြီးပြင်း။ တဦးတည်း babysitting ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်လို့မရပါဘူး။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိရန်ပင်ပန်းအလုပ်အကိုင်။ သငျသညျအိမ်ပြန်လာရုံပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုမှဆင်းကျလိမ့်မည်။ အာရုံကြောရုံတိုက်တေနီယမ်လိုအပ်ပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်ပညာတတ်များအခွားသူမြားစှာပါဝငျသညျ: ကဒါပေါ်မှာစိတ်ပညာရှင်နှင့်သူနာပြုနှင့်ဆရာ, နှင့်ပဋိပက္ခနှင့်လူရွှင်တော်များနှင့်အနုပညာဝေဖန်ရေး, သမိုင်းပညာရှင်နှင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါအခက်ခဲဆုံးအရာ, အလိုချင်သောဖက်ရှင်အတွက်မိဘများ၏သဘောထားကို, သူတို့နှင့်အတူပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေးဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခငျသညျပဋိပက္ခမိဘများဤမျှလောက်မဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ယခုအပြစ်တွေအကြောင်းကို! လစာ, သင်တန်းတစ်လ 100000 မဟုတ်ပေမယ့်သင်ပညာရေးနယ်ပယ်များတွင်အတွေ့အကြုံကမပါဘဲလာလျှင်ပင်, 20000 သင်သည်လစာပတေရုသအဘို့ဖြစ်၏အာမခံနေကြသည်။ ထိုအခါအပြည့်အဝအကျိုးခံစားခွင့်အထုပ်နှင့်လူမှုရေးလုံခြုံရေး, ပိုက်ဆံ၏ငွေပေးချေမှု, paid နေမကောင်းနိုင်စွမ်း, အားလပ်ရက် 42-ပြက္ခဒိန်နေ့နှင့် 1-7 နာရီနှင့်အတူသို့မဟုတ်ညနေပိုင်းတွင် s13-13chasov အတွက်နံနက်ယံ၌နွေရာသီအခါ device ကိုသာ 19 မှုနှုန်းသို့မဟုတ်အလုပ်နှင့်အတူအာမခံပါသည်။ အခမဲ့ဝက်တစ်ရက် Count ။ အခမဲ့အဘို့မိမိတို့ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်လာဖို့အမြဲတမ်းအခွင့်အလမ်း။
အလုပ်အကိုင်ခက်ခဲသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးသည်နှင့်သင်အလွန်သို့မဟုတ်မမှာအားလုံးကလေးတွေလိုမဟုတ်ကြလျှင်, အဲဒီမှာမသွားကြပါဘူး။ ကောင်းသောအဘယ်အရာကိုမျှထိုသို့ရောက်ရလိမ့်မည်။
И ещ непременное условие — это иметь умное и доброе сердце.
တစ်ဦးသူငယ်တန်းဆရာမအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက်, သင်သည်သူတို့ရှိသူတို့ရဲ့အဖိုးတန်ဆုံးအရာများအတွက်မိဘများ၏တာဝန်ယူဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်, တစ်ဦးအလွန်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ရန်ရှိသည်။
သင်အုပ်စုတွင်စည်းကမ်းမထားနိုင်ပါလျှင်၎င်းသည်အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်, အမြိုးသားအထိုင်, ဒါကြောင့်မည်သည့်အတန်းအစားထွက်သယ်ဆောင်ဒါမှမဟုတ်ကလေးတွေနှင့်အတူလမ်းလျှောက်ယူနိုင်တော့မည်ခေါင်းပေါ်မှာ, ပြော. မတည်ငြိမ်တိတ်ဆိတ်အချိန်အများဆုံးအပြစ်အုပ်စုကို dadut.Kak အကျိုးဆက်မိဘများမကျေနပ်တဲ့ပါလိမ့်မည်အိပ်လို့မရ စကားမစပ်သည်သူ၏ချဒ်ခေတ်သစ်မိဘများအကြောင်းကိုအားလုံးအသေးစိတ်ကြားချင်ဘဲ, ဖွာအာရုံကြောပညာပေးနှင့်ပျော့ပျောင်းသော raboty.Tak ပညာပေးအနေဖြင့်အဘယ်သူမျှမစိတ်ကျေနပ်မှုတစ်ခုသူငယ်တန်းအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါဘူးစကားပြောနိုင်မည်ဖို့လည်းလိုအပ်သည့်အရာ။
Posted in, ယောဘနှငျ့အလုပ်ရှာဖွေရေး
21 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,681 စက္ကန့်ကျော် Generate ။